China nylon tambo nhungamiro yakagadzirirwa matani gumi crane fekitori uye vanotengesa | H & F. nylon
Izvi zvinotevera rumwe rudzi rwakajairika rweyinylon guider.
Crane fekitori tambo guider kuita zvinodiwa mwero
(1) Kukwanisa kupinda nekubuda patambo pasina chiitiko.
(2) Iko kugona kwekutsimbirira tambo zvakavimbika kuitira kuti tambo yetambo isakwanise kusvetuka kubva paburi.
(3) Kugona kufambisa zvine mutsindo uye kumisa tambo pasina kudzikamisa.
(4) Kuisa kuri nyore, kubvisa disassembly uye kugadzirisa tambo vatungamiriri.
(5) Nhungamiro yetambo ichave isingashande.
(6) Onai kuti tambo yesimbi tambo ine imwe kona yekutsauka yakananga kudivi reelis pasina kupindira pakati petambo nesirinda.
(7) Ichishandiswa pamwe chete neanosimudza zviyero, inofanira kukwanisa kuve nechokwadi chekudzikamisa maitiro.
Zvakanakira nylon tambo inotungamira:
(1) Dzivisa ichitenderera waya tambo kuitira zvakajairika mashandiro emagetsi chitakuriso.
(2) Kuwedzeredza hupenyu hwehupenyu hwe tambo tambo uye reels.
(3) Kuchinjana kwakanaka uye hwakagadzikana mhando.
Iwo matsva tambo madhairekitori ane akajeka mabhenefiti pane iwo ari kushandiswa maererano nemashandisirwo, kunyanya maererano ne.
Makoresi eNylon anotungamira achienzaniswa nesimbi inotungamira.
(1) Tambo tungamira wedhizaina tambo tambo nati, kunze kwetambo block uchishandisa kuomarara, kuramba maronda, ngura kuramba, density, diki yepamusoro simba reinjiniya mapurasitiki - kukanda (MC) nylon kumanikidza kuumbwa, kugadzira maitiro kuri nyore. Unyanzvi hwekuita paramita yeMC nylon inoratidzwa mune tafura yakasungirirwa.
(2) Iyo yekumberi uye yekumashure tambo inotungamira nati yetambo teki yakabatana nepini shaft, inova nyore kumisikidza uye kubvisa. Kunze kwetambo chivharo chakanangiswa netambo kune gumi° oblique angle, kana tambo tambo ikamonera, nekuda kwesimbi (MC) nylon ine kuoma, tambo tambo inogona kumira ≤ 3 ° oblique kudhonza.
(3) Cast mhando (MC) nylon density iri diki, ine yakanaka yekuzvizora uye yakasununguka, saka huremu hwetambo gwara hwakareruka, hapana kusakara uye kubvarura patambo yetambo, kunogona kuwedzera hupenyu hwetambo tambo.
(4) H-mhando yemagetsi hoist H1 base mhando, zvinoenderana neZBJ80013.4-89 + waya tambo yemagetsi hoist bvunzo nzira "yezvakasiyana bvunzo. Kana pasina chirauro wega-huremu simba, tambo yesimbi tambo inogona kuburitswa zvakasununguka kubva kunetambo tambo mune tambo nzira, uye kusvika JB / ZQ8004-89 mune mhando yepamusoro zvigadzirwa indekisi; Mune iyo M4 yakatarwa mutoro webasa rakaunganidzwa pasi pemaawa zana nemakumi maviri ehupenyu bvunzo, edza tambo tambo, kuwedzera kune tambo kunze kwebhokisi, pinda tambo vhiri yemuno kupfeka, hapana imwe mhedzisiro pakushandiswa kwekuita kweiyo kukuvara.
(5) Inogona kushandiswa yakananga seye tambo gwaro rekuputika-chiratidzo chemagetsi hoist.
Pashure: zvinhu zvenaironi chinotenderera aripo
Zvadaro: yakakosha saizi nylon payakabatanidzwa
Nylon Rope Nhungamiro
Nylon Wire Rope Nhungamiro